Fanontana Pasta Solder - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax SMT trano dia manana milina fanontam-pirinty solder mandeha ho azy hanamboarana ny paoma solder amin'ny strencils.
fanaraha-maso henjana ny fanontana pirinty
Ny mpanonta mametaka apetaka dia mazàna amin'ny famoahana lovia, fametahana solosaina, fanontam-pirinty, ary famindrana ny birao ircuit.
Ny fitsipiky ny asany dia ny: amboary ny board circuit hatonta eo amin'ny latabatra fametrahana toerana fanaovana pirinty, ary avy eo ampiasao ny scrapers an'ny mpanonta printy hanontana ny paty solder na lakaoly mena amin'ny pads mifandraika amin'ny stencil. Ny tobin'ny famindrana dia fampidirana ao amin'ny masinina fametrahana ho an'ny fametrahana azy ho azy.
1. Inona no atao hoe Printer Pasta? Ary ahoana no fiasan'izy io?
Ny fanaovana pirinty paty apetaka amin'ny takelaka boribory ary avy eo mampifandray ireo singa elektronika amin'ny tabilao mihodina amin'ny alàlan'ny «refow» no fomba fampiasa matetika amin'ny indostrian'ny famokarana elektronika ankehitriny. Ny fanontana pirinty vita amin'ny solder dia mitovy amin'ny hosodoko amin'ny rindrina. Ny tsy fitovizany dia ny fampiharana ny pâte solder amin'ny toerana iray sy hifehezana ny habetsaky ny pâte solder tsara kokoa, takelaka vy manokana (stencil) tsy maintsy ampiasaina. Fehezo ny fanontana pirinty solder. Rehefa vita pirinty ny pasteur solder dia noforonina amin'ny endrika "田" ny pacte solder mba tsy hivangongo be loatra ao afovoany aorian'ny fitrandrahana ilay paty solder.
2. Ny firafitry ny fanontana vita amin'ny solder
（1. Rafitra fitaterana
（2） Rafitra fametrahana ny efijery
System 3, rafitra fametrahana PCB
（4. Rafitra hita maso
System Rafitra Scraper 5）
（6） Fitaovana fanadiovana efijery mandeha ho azy
（7, latabatra fanontana azo ovaina
3. Ny fiasan'ny fanontana vita amin'ny solder
Ny fanontam-pirinty vita amin'ny solder no fototry ny kalitaon'ny solder eo amin'ny takelaka boribory, ary ny toerana misy ny paty solder sy ny habetsaky ny tin dia zava-dehibe. Matetika dia hita fa ny pirinty solder dia tsy vita pirinty tsara, ka mahatonga ny solder fohy sy ny solder tsy misy.